जादूगर खेल 🥇 प्रविष्ट गर्नुहोस् र Emulator.Online बाट मजा लिनुहोस्
जादूगर खेल यो एक धेरै रमाइलो खेल हो, यसले तर्क र मेमोरी र स्थानिक कौशल विकास गर्दछ। यसको इतिहास, यसको भेरियन्टहरू र कसरी खेल्ने भनेर जान्नुहोस्।
जादूगर खेल: कसरी एक पछि अर्को चरण खेल्ने? 🙂
जादूगर गेम खेल्न को लागी, नि: शुल्क को लागी यी चरण-देखि-चरण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् :
चरण 1 । तपाइँको मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस् र खेल वेबसाइटमा जानुहोस् Emulator.online.
चरण2। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईले क्लिक गर्नु पर्छ प्ले र तपाईं कन्फिगरेसन छनौट गर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ। ????
4 कदम। खेल जित्नको लागि तपाइँले सबै स्याउहरू भित्तामा वा आफैंलाई नपिइराख्नु पर्छ । जसले खेलको अन्त्यमा सबै भन्दा बढि अंक प्राप्त गर्दछ उसले जित्छ।
जादूगर खेल के हो? 🔴
जादूगर एक सरल र रमाईलो खेल हो यो पृष्ठबाट तपाईं अनलाइन पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
सर्प-टाइप खेलहरू उनीहरूको सादगी, प्लेबिलिटी र अत्यन्त रमाईलोको कारण सबैभन्दा खोजिने छन्, र जादूगर यी खेलहरू मध्ये एक हो जुन यी सबै सुविधाहरू पूरा गर्दछ।
जादूगरले आफ्नो स्टिकको माध्यमले चेनमा रंगीन बलहरू फ्याँक्दछन्, जुन यी गोलाकारहरू मिलेर बनेको हुन्छ। विचेरको मिशन भनेको सबै बलहरू हराउने बनाउनु हो तिनीहरू अन्तिम प्वालमा पुग्न अघि। यो गर्नका लागि तपाईले एउटै र colorको तीन वा बढी बलहरू सामेल गर्नुपर्दछ ताकि ती विस्फोट भएर चेनबाट हराउनेछन् र तपाईंको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछन्।
जादूगर कथा ⚫
जादुगर जस्ता खेलहरू, जुन एक निश्चित बिन्दुबाट रंगीन बुलबुलेहरू फ्याँकेर बलको श्रृंखलालाई नष्ट गर्ने लक्ष्य थियो, १ 1995 XNUMX in मा सिर्जना गरिएको थियो।
लक्षित दर्शकहरू बच्चाहरू थिए। यो एक थियो बच्चाहरूको खेल , किनकि यसको संयन्त्र सरल थियो र रंगीन बलहरू सबै बच्चाहरूलाई मनपर्‍यो। तर छोटो अवधिको अवधिमा, यो जानियो कि केटाकेटीहरू मात्र खेल्न चाहँदैनन्, वयस्कहरूले पनि यो खेल मन पराउँथे । यसले सुखद रूपमा यसको सिर्जनाकर्ताहरूलाई चकित गर्‍यो र अधिक संस्करणहरू समान विषयवस्तुको साथ सिर्जना गरिएको थियो।
यसको ठूलो लोकप्रियता यो हुन सक्छ भन्ने तथ्यका कारण थियो एक कम्प्युटर मार्फत खेल्नुभयो कार्ट्रिज खरीद गरेपछि, किन यो पीसी खेल मानिन्छ। आजकल, शारीरिक शारीरिक रूपमा किन्नु आवश्यक छैन जुन एक राम्रो अग्रिम हो।
यसको सरल डिजाइन यसको मतलब यो कुनै पनि उपकरणमा प्ले गर्न सकिन्छ, चाहे कन्सोलहरू, मोबाइलहरू, ट्याब्लेटहरू र पनी मार्फत अनलाइन पृष्ठहरू मार्फत नि: शुल्क।
कुनै ठूलो परिचय, कुनै भारी वा जटिल ग्राफिक्स आवश्यकताहरू बिना, यो एक सरल, चुनौतीपूर्ण र मनोरन्जनात्मक खेल हो।
जादूगर खेलका प्रकार 🔵
जादूगर खेल एक प्रकारको छ रंगीन बल खेलहरूको । तपाईं यसलाई बबल खेल वा को रूपमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ बबल शूटर र उद्देश्य उस्तै हो, र colored्गको बलहरूको चेन वा अनुक्रम नष्ट गर्नुहोस् बुलबुलेहरू फाल्दै। जब तपाईं तीन वा अधिक समान रंगको सँगै राख्नुहुन्छ, तिनीहरू हटाइन्छन्।
हामी यस ढाँचा को सब भन्दा प्रतिनिधि खेल को नाम जाँदै छौं।
यो एक हो सब भन्दा प्रसिद्ध बुलबुले । यस अवस्थामा यो बलको श्रृंखला होइन, तर बलहरू पर्दाको छतमा जम्मा हुन्छन् र तिनीहरूले भूमिमा आउनु अघि तपाईंले तिनीहरूलाई हटाउनु पर्छ।
बबल भिडियो खेल को अर्को क्लासिक, एक धेरै संग सरल तर छिटो प्रणाली यसले तपाईंलाई छिटो सोच्न बाध्य पार्छ यदि तपाईं मेसिनले तपाईंलाई हराउन चाहानुहुन्न भने।
बुलबुले सर्पिल वरिपरि घुम्छ त्यो खतरनाक रूपमा केन्द्रको नजिक छ। यो हुनबाट रोक्नको लागि, तपाईंले बबुलहरू शूट गर्नुपर्नेछ उनीहरूलाई श्रृंखलामा परिचय दिनका लागि, or वा बढि समूह बनाउनुहोस् ताकि यो छोटो भयो। यदि तपाइँ एक श्रृंखलामा समाप्त गर्नुभयो भने तपाइँ अर्को चरणमा जानुहुन्छ, छिटो र अधिक गाह्रो। के तपाई अन्ततः बहुरंगी सर्पलाई हराउन सक्नुहुन्छ?
यस अवस्थामा, त्यहाँ संशोधनहरू छन् र तथ्य यो हो बुलबुले जस्तै आकार छन् विभिन्न फलहरू , जुन तपाईं तिनीहरूलाई eliminate वा अधिकका समूहहरूमा सामेल हुनुहुनेछ तिनीहरूलाई हटाउन र स्क्रिन खाली गर्न।
यद्यपि यस खेलमा केहि तत्वहरू छन् जुन यसलाई अलग पार्दछ। उदाहरण को लागी, समय बबलबाट जान्छ तल तल जान्छ , त्यसैले यदि तपाईं चाँडै प्रतिक्रिया गर्नुभएन भने, तपाईंले आफूले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै अघि खेलको अन्त्यमा भेट्टाउनुहुनेछ।
र यदि तपाईं अझै यसलाई अझ रमाईलो बनाउन चाहानुहुन्छ, कलरब्लिन्ड मोड प्रयास गर्नुहोस्, जसमा रंगहरू परिवर्तन गरिएको छ र तपाईंसँग यो सजिलो छ वा छैन।
खेल जादूगर नियम ules
जादूगर चलाउने धेरै सजिलो र रमाईलो छ , त्यसकारण यो बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि एक आदर्श खेल हो।
हामीले गर्नुपर्ने भनेको छ सही स्थानमा बलहरू पठाउन जादूगरको स्टाफ प्रयोग गर्नुहोस् चेन मा। हाम्रो लक्ष्य कम्तिमा ident समान बलहरूको समूह सिर्जना गर्नु हो ताकि यी बलहरू चेनबाट हराउनेछन् र यसरी बढ्नबाट रोक्नुहोस्।
तिमीले अन्तमा पुग्न अघि सबै बलहरू मेटाउनुहोस् बाटोको र प्वालबाट प्वाल हुन्छ।
हतार गर्नुहोस् किनकि यो धेरै छिटो जान्छ! खेल पूर्ण गर्न different बिभिन्न स्तरहरू छन्।
खेल जादूगर about को बारेमा सल्लाहहरू
जादूगरसँग धेरै जटिल नियमहरू छैनन्, तर यसको मतलब यो एक बोरिंग खेल हो। वास्तवमा, यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने यी सुझावहरूलाई ध्यानमा राख्नुहोस्, तपाईं स्तरहरूमा अड्किने सम्भावना हुन्छ र तिनीहरूलाई पास गर्न सक्षम हुँदैन।
यो हामी तपाईंलाई पहिलो सल्लाह दिन्छौं। सुरुमा यस्तो देखिन्छ कि यसमा कुनै प्रकारको जटिलता छैन र तपाई छिटो स्तर पार गर्न लाग्नुहुन्छ। तर होइन! जब तपाईं यसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, बलहरूको श्रृंखला यति ठूलो छ र यति छिटो जान्छ कि तपाईंसँग यसलाई हटाउन समय छैन र तपाइँ सबै प्राप्त गर्न को लागी गलत ठाउँमा रंगीन बलहरु राख्नु छ।
हो, हामीलाई थाहा छ कि त्यो लक्ष्य हो। तर तपाई कुन बलहरू हटाउनु हुन्छ?
जब तपाईं सक्नुहुन्छ चेनको टाउकोबाट बलहरू हटाउनुहोस्। सम्झनुहोस् कि यो हाम्रो अयोग्यतामा पुग्ने प्वालमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछ, र यो हामी टाढा रहन चाहन्छौं।
भर्खरका व्यक्तिहरू बिर्सनुहोस्, कम्तिमा लामो साईन ठूलो भएसम्म।
यो स्वचालित हटावट के हो? जादुगरबाट केहि प्रकारको जादू? ठिक छ, छैन। यो एक भएको जस्तै हुनेछ रणनीति। हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ चेनबाट र color हटाउँदा, उही र color यसको अन्त्यमा मिल्दछ ताकि तिनीहरू आफैंले मेटाइनेछ जब पहिलो हराउँछ।
धेरै गडबड? म तपाईंलाई एक दिन्छु उदाहरण
हाम्रो चेनमा हामीसँग निम्न क्रमहरू छन्: पहेलो, बकाइन, फिक्का, पहेलो, पहेंलो, निलो, हरियो, पहेंलो ...
बेंसी बल प्रक्षेपण गर्न आदर्श स्थान दुई लिलाकहरू एकसाथ हुनेछ। त्यसो भए, हामी प the्क्तिबाट लिलाक रंग हटाउँछौं, हैन? र अर्को कुरा के हुन्छ त्यो यो हो कि जब पहेलो र together सँगै आउँदछ, तीन पहेलो बलहरू सँगै मिल्दछन् कि आफै हराउँछन्।
के तपाईंलाई यस खेलको संस्करणहरू मनपर्‍यो? गर्नुभयो यी चालहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ ? तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ धेरै किसिमका खेलहरू र आनन्द लिने तरिकाहरू छन् जादूगर खेल।
तपाईं मजा लिन सुरु गर्न के को लागी प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ!